उद्योगी व्यवसायीका समस्यामा साथ दिन्छु : सासंद यादव - GBM
२०७४ पुष २ gautam buddha sandesh	0 Comments
भैरहवा, २ पौष । उद्योग व्यापार संगठन रुपन्देहीले नननिर्वाचित रुपन्देही क्षेत्र नं. ४ का प्रतिनिधिसभा सदस्य प्रमोद कुमार यादव र रुपन्देही क्षेत्र नं. ३(१)का प्रदेशसभा सदस्य सन्तोष कुमार पाण्डेयलाई स्वागत गरेको छ ।
संगठनले एक कार्यक्रमका बीच नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य यादव र संघीय समाजवादी फोरम नेपालबाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य पाण्डेयलाई स्वागत गरेको हो ।
कार्यक्रममा बोल्दै प्रमुख अतिथि एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य प्रमोद कुमार यादवले आफु नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित भए पनि सबै राजनीतिक दलसंग हातेमालो गरेर अगाडी बढ्ने बताए । उनले मर्चवारमा उद्योगी व्यवसायीहरुको सहयोगमा कम्तीमा पनि २५ शैयाको अस्पताल बनाउने आफुले लक्ष्य राखेको बताए । उनले उपचारको अभावमा कसैको ज्यान नजाओस भन्ने उद्धेश्यका साथ मर्चवार क्षेत्रमा एम्बुलेन्स सेवा समेत आवश्यक रहेकोमा जोड दिए । यादवले उद्योगी व्यवसायी भएको कारण आफुलाई व्यवसायीका समस्याको बारेमा जानकारी भएको र समस्या समाधानमा लाग्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
त्यस्तै विशिष्ट अतिथि एवं रुपन्देही क्षेत्र नं. ३(१) प्रदेशसभा सदस्य सन्तोष कुमार पाण्डेयले लुम्बिनी क्षेत्रको विकासको लागि स्थानीयवासीको चासो हुनुपर्ने बताए । उनले ५ नं. प्रदेशको राजधानी रुपन्देहीमा बनाउन आफु आन्दोलनको नेतृत्वको गर्न तयार रहेको औल्याए । पाण्डेयले केही नेताहरुको व्यक्तिगत स्वार्थका कारण सिद्धार्थनगर नगरपालिकालाई उपमहानगरपालिका बन्न नदिइएको समेत बताए ।
कार्यक्रमको उद्धेश्य माथि प्रकाश पार्दै उद्योग व्यापार संगठन रुपन्देहीका अध्यक्ष नारायण प्रसाद भण्डारीले ५ नं. प्रदेशलाई लुम्बिनी प्रदेश नामाकरण गर्नुपर्ने र प्रदेशको राजधानी रुपन्देहीमै राख्नुपर्ने धारणा राखे । उनले रुपन्देहीमा सञ्चालित राष्ट्रिय गौरबको आयोजनाहरुलाई समयमै सम्पन्न गर्नको लागि पहल गरिदिन नवनिर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य र प्रदेशसभा सदस्यलाई आग्रह गरे । भण्डारीले भैरहवा शहरलाई देशकै स्मार्ट सिटीको रुपमा विकास गर्नुपर्ने र यस क्षेत्रमा मेला महोत्सवको लागि भैरहवा मण्डपको आवश्यकता रहेकोमा जोड दिए ।
पर्यटन व्यवसायी सञ्जय बजिमयले यस क्षेत्रको पर्यटकीय विकासको लागि होटल तथा रेष्ट्ररेण्टलाई राति १० बजे सम्म सञ्चालन गराउनको लागि पहल गरिदिन नवनिर्वाचित प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यलाई आग्रह गरे ।
उद्योग व्यापार संगठन रुपन्देहीका उपाध्यक्ष ग्रिस चन्द्र त्रिपाठीको स्वागत मन्तव्य, निर्वतमान अध्यक्ष खिम बहादुर खत्रीको धन्यवाद ज्ञापन तथा महासचिव अनिल कुमार ज्ञवालीको सञ्चालनमा सम्पन्न कार्यक्रममा संगठनका कोषाध्यक्ष सचिन रोक्का, सल्लाहकार सुरेन्द्र बस्याल, सचिवालय सदस्य रामचन्द्र रेग्मी, मोबाइल व्यवसायी संगठन रुपन्देहीका अध्यक्ष बैजनाथ गुप्ता लगायतको आतिथ्यता रहेको थियो ।
← लायन्स युथद्धारा बालगृहलाई खाद्यान्न हस्तान्तरण
राष्ट्रिय धान दिवस : किसानको खेतमा जनप्रतिनिधि
अनियमित विद्युत कटौतीले हैरानी
२०७५ जेष्ठ २६ gautam buddha sandesh	0